Home » Featured » Ny Strata an'ny Wheatstone 32 dia manome ny fampahalalam-baovao lehibe kokoa sy ny fantsom-pifandraisana Audio Audio IP
Hatramin'ny niorina tamin'ny 1974, ny Wheatstone Corporation dia namolavola sy namorona fitaovana haino aman-jery matihanina tamin'ny alàlan'ny marika WHEATSTONE, AUDIOARTS ENGINEERING, PR&E ary VOXPRO anarana. Vokatra maro ao amin'ny Wheatstone Corporation lisitry ny fitrandrahana dia:
The Wheatstone Corporation's tsotra ny vokatra voalohany disco mixer, izay nampidirin'ny mpanorina Gary Snow. Tao anatin'ireo taona manaraka, ny Audioarts dia namolavola sy nivarotra fitaovana ivelany ho an'ny orinasam-peo. Ary tafiditra ao anatin'izany ny iray amin'ireo fampitoviana parametric voalohany, ary koa ny fampiononana voalohany, ny Audioarts 2000, izay nampidirina tamin'ny 1976, ary izao miaraka amin'ny Strata 32, Ho afaka hahazo fantsom-pifandraisana bebe kokoa sy fanavaozana audio IP ny Broadcasters.
Tapak-tongotra mifanentana - 40 "wx 27.5" d
Maninona no tokony hifantina ny vokarin'ny varimbazaha ny Broadcasters
Sarotra 40 santimetatra 64 channel Audio Console Audioarts Audio Audio 2000 fampitana injeniera fampitana Engineering fitaovana fampitaovana matihanina sivy Gary Snow fampidirana IP fanavaozana audio Fitaovana fampitaovana matihanina matihanina Spears & Arrows Strata 32 TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera Tambajotra WheatNet-IP Wheatstone Corporation 2020-05-07